TVG no fototr'izao rehetra mahazo ny Malagasy izao
Date: 28 août 2017 - 14:28
Aza dia mora manadino loatra ry Malagasy ary aza adino fa ny ekipan'ny TVG no fototr'izao zava-dratsy mahazo ny Malagasy izao, na toe-tsaina, na fomba fihetsika sns...
Izao no vokatry ny fahavetavetana ara-toetsaina, olona kamo hisasatra no lasa mameno tanàna ka ny basy no mipôpôka ny niafarany.
Ny mandova azy ankehitriny moa dia izao no ataony eh!, misosa tsara hono ny fiainan'ny Malagasy.
Te halaza ah we ry Njoun de manokatra sujet matetika ah!
ze tina atongavana tenenina!
Date: 28 août 2017 - 15:22
zavatra marina io tenin i Njoun io fa ny borné borné iany, ry mpilaza fa " lalana ve inanankanina" sy oe avelao ny olona ivarotra, avy eo gaboraraka daholo, equipe TGV iany reto mbola mitondra reto fa niova palitao fotsiny. Aiza no andeoso vao misy miteny ny marina de oe inona no tedavina . Mba sokafy ny maso dia mijereva alavitra fa tsy miandry tataka avy any andanitra
Napetraka ny fanamby tratra ny tanjona, firenena faha 5 mahantra indrindra ny malagasy ankehitriny.
Asa nanao ahaona ny fiainan'ny olona nakeny @ 13 mei sy Ambohitsirohitra @ izao fotoana izao fa raha ny an'i ANR aloha dia efa mihinan'ny azo fotsiny izy ankehitriny, ry pierre bleu sy ry gista na ny frantsay ary vaky vava t@ fananana azony nandritra ny fotoana fohy.
Date: 28 août 2017 - 15:49
gyvv>ka na himenomenona isan'ora isa minitra eo anefa dia hanao inona e?ze tonga eo nge de mitovy daholo,ny hameno ny paosy aloha ny ao an-tsaina voalohany.amiko tsy hataoko hampihetsika ny volomasoko izay tonga eo.
Na ianareo io aza no tonga eo dia ny paosy aloha ny voaloha laharana.
Langolangoana @resaka matavy fotsiny ny olona mba hahalany nefa rehefa tonga ao manapina maso daholo.mandaingA eo daholo raha tsy marina izany!
ka aza be menomenona eo fa mila fandraisana andraikitra avy @tsika ihany koa ny firenena fa tsy hoe natokana ho adidin'ny mpitondra sy ny tariny fotsiny ihany ny fampandrosoana ity firenena ity!!!
Date: 28 août 2017 - 16:10
hanafaro faramandimby fa tsy mety ary tsy azo atao eto ambonin'ity tany ity zany fanoganampanajakana izany
ary ny tena loza dia ireo communauté international ireo no tena manararaotra ny fahavoazana, fatany fa tany manakarena i Mcar dia tena robainy tsy hanany antra
ireo mpanongampanjakana moa dia havelany hiriaria sy tohanany mafy mba hanamora ny fangalarana satria raha tena olona tena tia tanindrazan no tonga eo dia veloma ry fanambakana isankarazany
Za ndray tsy mba manome tsiny ani TGV , aleo ataony fa mitady azy ny gasy , jiolahimboto ny boite de nuit no omena fahefana, dia ho gaga ve hoe izay manana basy no manjaka? ary jereo itY Constitution mba nataony, contradiction no betsaka, dia nofitahiny kely , nomeny comptable mitsambikimbikina ity aloha, dia mitehaka, dia mihitsoka , dia inona indray no ataon ilay gasy avy eo, ngoma anao izany PREZDA, mbola te handray ny kihony misimisy fa tsy afapo , mitohy iny lalana iny ,
Date: 02 septembre 2017 - 09:16
Izy sy ireo mpiara-mandihy aminy
Date: 02 septembre 2017 - 18:42
dia aza adino koa ry malagasy fa ny filoha @ izao fotoana izao dia mpikambana tao @ TGV sady minisitra tao nandritra ny 5 taona. Candidat de substitution an'ny TGV ny filoha Rajao. Nilatsaka ho kandidan'ny TGV izy aloha fa tsy lanin'ny mpikambana fa i Edgard no nironan'ny fon'ny TGV. Nilatsaka nisolo kandidà tsy afaka nilatsaka izy ary mbola notohanan'ny filohan'ny TGV.
hvm = tgv = arema
izay mpikambana @ ireo kanefa tsy maharaka ny dikan io équation io dia babakoto farak izay zokiny
Date: 04 septembre 2017 - 11:35
Grave be koa anie ireo Alouettes efatra nafarany e,misy resaka blanchiment d'argent hono satria tsy tokony azo amidy ary tsy maintsy maka autorisation amin'ny manampahefana Belges vao azo atao kanefa dia tonga taty Madà.
Grave be io an!!
Date: 05 septembre 2017 - 07:39
salama tompoko ô !
Eto zany dia misy te hitsikera sy hanometsiny olona na fikambanana ,fa mba firy taona alo Njoun e ,sao mbola tanora loatra ka tsy maharaka ny tantarampirenena.
Date: 05 septembre 2017 - 07:46
pedro aza adino fa nandray anjara mavitrika tamn fanapoteana teto iny...ry zareo satro bory
Date: 05 septembre 2017 - 08:14
Fanatisme no manjaka ao ampon'ireto mpisera eto amin'ny Forum.moov ireto.
Lavitra azy ny hanana fijery mahitsy, tsy mitongilana ao anatin'ny fanarahana ny fizotry ny tantaram-pirenena malagasy.
Lavitra azy ireo ny ady hevitra madio, objective, constructive.
Fa Fanenjehana olona tsy misy fepetra, sy fanohanana olona tsy misy fepetra no misy eto.
Fanamarihana : Vao niala teo ambany ziogan'ny vazana isika (fahaleovan-tena ara sosialy), dia nanomboka teo i Madagascar no nikoroso fahana. Fa tsy vao tamin'ny andron'i Rajoelina akory.
Aza kely fitadidiana isika.
1972 - 1991 - 2002 - 2009 : Dia hetsi-bahoaka, fanonganam-panjakana daholo tsy ankanavaka, nitaky tamin'ireo Mpitondra teo amperin'asa, fanatsaràna ny fari-piainan'ny vahoaka sy fialana amin'ny didy jadona ary demokrasia.
Date: 05 septembre 2017 - 09:38
T-Marina: Na lazaina fa fanatika, tsy objective na tsy constructive ny olona milaza ny heviny eto dia tsotra ihany afaka mampitaha ny zava-misy kosa izahay.
Ka ireto no santionany:
1 Ny fanapotehana ny toe-tsaina t@ alalan'ny fandrobana izay fananana tsy an'ny tena, t@ taona 2009 tompoko no tena nampirongatra azy, tsy i Zafy albert na i Tsiranana na i R8 no namporisika izany toe-tsaina izany fa dia t@ andron'i TGV, aza gaga raha mbola mirongatra izany fandrobana izany ankehitriny satria dia ny HVM dia ny mapar taloha ihany ary ny razabeny dia ny TGV sy ny AREMA;
2 Ny famporisihana ny fanaovana kolikoly sy ny tsy fananjana ny lalana tompoko dia t@ taona 2009 no tonga teo @ fara-tampony raha tsy hiresaka afatsy ny caporal mibaiko jeneraly, ny fanomezana volan' miaramila hanongam-panjakana. Aza gaga ianao raha misy zandary 1 isan'andro no voaroka ankehitriny vokatr'izany
3-Raha resaka fampandrosoana indray dia maro tsy tambo isaina no afaka resahina fa dia jereo ny niafaran'i JIRAMA. T@ vao tonga teo ny TGV dia nilaza ny hanarina ny JIRAMA ary dia nadroaka ireo vazaha nitondra io orinasa io, kanefa dia izao no vokany na ny fikojakojana ny groupe lehibe izay vao novidiana t@ 2008 ary tsy vitan'ny entretien.
Ekena fa samy nanao tsy mety daholo izay mpitondra rehetra nitondra teto fa sainga kosa ny zava-bitan'ireo mpitondra nanomboka 2009 kosa dia tena tompon'andraikitra tsy afa-miala @ izao fahapotehan'ny firenena izao. Ka raha mampalahelo anao ny nilazani fanatika fa i TGV no fototr'izao rehetra mahazo ny Malagasy izao dia tsy maninona ampianay hoe ny TGV sy AREMA satria dia ny olon'ireo antoko ireo no tompon'andraikitra voalohany @ izao fanapotehana ny firenena izao.
Date: 05 septembre 2017 - 10:18
Ireo zavatra tanisainao ireo dia zavatra efa nisy daholo hatramin'izay, fa y endriny fotsiny no tsy mitovy.
- Tsy ny fanimbàna fananana ihany no manapotika Firenena.
- Ny fandrobàna dia efa nisy foana : vol autorisé
- Tsy mbola nisy tena fandrosoana teto Madagascar.
Tsy nisy afa-bela amin'ny fahapotehan'i Madagascar, sy ny fahantrànn'ny vahoaka malagasy ireo Filoha rehetra izay nifandimby teto na iza na iza.
Na i Ravalomanana na i Andry Rajoelina.
Date: 05 septembre 2017 - 10:51
Izahay matao miteny dia misy porofo fa tsy sanatria miteniteny foana ka ny tsy fitiavan'olona no atao mibahana ao antsaina.
Milaza ianao fa tsy nisy tena fandrosoana teto marina izany, fa nisy mpitondra kosa nahavita betsaka noho ny hafa raha ny soa ho an'ny vahaoka no jerena, ary misy mpitondra kosa nanapotika betsaka noho ny nataon'ny mpitondra sasany.
Niresaka krizy ianao dia sahiko ny milaza fa dia nopotehin'i Ratsiraka ny firenena nandritra ny krizy 1991 sy 2002 noho ny fitazonana fitondrana, efa hita sy tsapa fa tsy nanana vahaoka manara-dia azy intsony izy nefa dia nahavita niziriziry nirazona fitondrana nandritra ny 9 volana t@ taona 1991, ny t@ 2002 dia tsy ireny hita-poko hita-pirenena ireny fa na dia hamotika sy hanimba ny foto-drafitr'asa dia nataony mba hitazomana seza daholo izany rehetra izany.
Ny tamin'ny 2009 moa tsy hiverenako intsony ny fahotana mahafaty vitan_dry ANR angalana seza fa dia izao hianantsika ankehitriny izao no vokany.
Date: 05 septembre 2017 - 11:56
Aza dinganina ny tantara,
Tonga dia vakiana fotsiny fa mpiaro an-dRavalomanana ianao io.
Responsabilité partagée iny crise du 2002 iny.
Ny Vy tsy mikitrana irery.
Ekeko daholo ireo zavatra lazainao ireo : Samy nitondra ny anjarabirikiny tamin'ny- fanapotehina na i Ratsiraka, na i Andry Rajoelina, na Hery Rajaonarimampianina, na Tsiranana, Na Zafy Albert, na iza na iza.
Tsy mbola nisy fandrosoana teo Madagascar.
Tsy mbola nisy fa fihemorana hatrany no nisy teto.
Surtout hatramin'ny fampiharana an'ity resaka flottement ny vola Ariary ity.
Vao vita ny raharaha 2002 dia avy hatrany dia nihen-danja ny vola ariary, dia hatramin'izao dia tsy avotra intsony.
Ny fanamboaran-dàlana dia adidin'ny Fanjakana, fa tsy progamme na projet Présidentiel.
Tsy azo hireharehana. Mitovy tsy valaka amin'ny fanamboarana hopitaly, Sekoly, fiantohana ny fandriampahalemana.
Izao fahoriana mianjady amin-tsika amin'izao fotoana izao, dia suite logique n'ny fanonganam-panjakàna izay nisy hatramin'izay nahazoan-tsika fahaleovan-tena.
Tsy misy afa-bela amin'izany ireo mpitarika : tokony mandalo fitsaràna daholo na iza izy na iza ka nanapotika ny Firenena tamin'ny endriny rehetra.
Date: 05 septembre 2017 - 12:04
Ny tena fahavalom-pirenena dia ireo miaro ny tsy tokony harovana, vokatry ny fanatisme :
Manao avocat du diable.
Ka raha vao mahazo fitondràna ny olona tohanany, dia mivavaka sy miankohoka (culte de personnalité) ao an-tongotry ny olona tompoiny,
Ka tsy mahita akory ny hadalàna izay ataony, tsy mahashy manakiana na manoro hevitra azy intsony.
Aza gaga isika raha mivarina amin'ny tsy tokony halehany ny Firenena :
Allégeance no misy eto.
Manomboka amin'ny miaramila izany,
ary ny vahoaka : Fanatiques.
Date: 05 septembre 2017 - 13:07
ony oa, farna'ny volana febroary 2009 ve mbola be olona teo @ kianja sa efa hanao laza masaka ny hetsi-(heto-)bahoaka fony nampalaza ny kraby de plouie nareo
Date: 05 septembre 2017 - 13:21
Ekena fa tsy misy mpitondra madio sy marina nefa kosa, dia tsy azonao lavina fa dia nisy ny sady tsy nanao izay lazainao fa adidy tokony nataony @ maha-mpitondra azy no mbola namotika na ny toe-tsaina na ny toe-karem-pirenena.
Tsy fanatisme velively na tsy fahaiza-mijery no mahatonga anay hilaza fa ny TVG no fototr'izao rehetra mahazo ny Malagasy izao satria dia voaporofo izany.
Raha niala teo @ fitondrana ny AREMA t@ 2002 dia foana tsy nisy ny kitapo-bola-panjakana ka moa ve tsy fanapotehana firenena ve izany,
Nefa raha niala teo @ fitondran-dra8 t@ 2009 nisy vola efa ho 2 milliards de dollar ny devise tao @ banque centrale. Tsy lazaiko aminao intsony ny fahapotehina nentin'i TGV teto.
Ka dia sahinay no milaza fa dia fototr'izao fahapotehana izao ny TGV ary sahy miaro andra8 izahay satria dia azonay tsapahi-tanana fa mba nahavita izay adidy tokony nataony t@ firenena ihany izy
Date: 05 septembre 2017 - 13:34
Iza no hametrahanao fanontaniana ?
Raha ny tenako dia ialako tsiny fa diso fiantefa ny fanontanianao.
Tsy haiko ny mamaly izany.
Tsy mpanohana TGV ny aty.
Ary tsy tia fanonganam-panjakana amin'ny alalan'ny grevy.
Quelque soit la forme.
Je condamne toutes formes de manifestation populaire d'ordre politique.
Date: 05 septembre 2017 - 13:37
Tena ialako tsiny aminao, fa raha nahay nanagadra ny tenako dia nogadraiko daholo ireo Mpanao politika nitarika vahoaka hi grevy sy nanapotika ny Firenena tsy ankanavaka :
- Zafy Albert
Ka raha tafiditra ao anatin'ireo ny olona tohananao dia sarotra amiko ny hiady hevitra aminao.
Date: 05 septembre 2017 - 13:41
Tsy afaka ny hanakiana an-dRavalomanana manokana ny tenako satria toa lasa fanenjehana azy manokana ny fanakianana azy manokana.
Fa amiko dia mbola tsy nisy ary tsy mbola nahazo ny Mpitondra mendrika azy i Madagascar depuis 1960 ka hatramin'izao.
Aza manao fisainana vôtrisy woua ry T-Marina a
Date: 05 septembre 2017 - 13:46
Tsy misy nanao ny marina na mpitondra na ny entina fa satria mbola olombelona daholo isika, fa saingy kosa ny nilazanao fa fanatisme sy tsy fananana objectif no mahatonga ny olona ilaza fa ny TGV no fototr'izao rehetra mahazo ny malagasy izao no tsy ekena. Ny antony dia efa hitapoko hita-pirenena fa dia ny zavatra nataon'ireo nanomboka 2009 no tena nampiazakazaka izao fahatrana izao nefa dia hambaranao ho fanatisme.
Raha mbola mitady ohatra hafa hanamarinana izay voalaza ianao dia mbola betsaka ny azo hambara ary @ lafiny rehetra mihitsy.
Date: 05 septembre 2017 - 13:47
Date: 05 septembre 2017 - 14:41
Ry T-Marina anie ela be vao mahazo resaka eh!, na ny jamba aza ve tsy nahita an'ireny
Date: 05 septembre 2017 - 15:13
Tsy hoe tsy mahazo resaka,
Fa izaho tsy tia miresaka amin'ny Fanatique.
Satria matetika rehefa à court d'argument ny olona fanatique dia lasa manao attaque personnelle.
Date: 05 septembre 2017 - 15:18
mitovy amin'io >>> Ok! nosoratan'toi io ve zany zao?
Date: 05 septembre 2017 - 15:48
Date: 05 septembre 2017 - 15:55
raha mamaky ireo message ireo dia mahita mazava fa ianao no tsy manana fijery mahitsy indrindra.
Voalohany dia mampiasa ny teny "fanatisme" izay fantatry ny malagasy ianao, ianao izay mahalala an izany no mety manao azy.
Manakiana ny zava misy ny olona , dia tsy hitako ny hanitarana an izany fa rehefa tsy marina ny voalaza dia lazao ny marina fa aza aolaka atsy sy eroa.
Mety tsy mahalala ny tantarampirenena toa anao daholo ny olona, ary tsy misy tonga lafatra teto , fa tsy manakana fampitahana izany, tsy tokony hosaronana fa efa nisy teto ohatra izany nilahatra vary sy menaka izany , hatr@ sira, efa nisy teto ny baranahiny hatrany @ tafika ka misy commandant tsy manaja général , izay mitazona kalack no mibaiko, aza atao mahagaga raha tsy misy ny filaminana, tsy misy milaza aminao fa anjely ravalomanana, fa zavatra kely fotsiny no mba holazaiko , io RN7 io, vitako ny miala maraina eto tana , tonga alina any toliara, izao roa andro , mbola sahirana raha ho tonga, ny mandeha alina efa tebiteby tsy lazaina, ary efa nisy fotoana teto , na ny mpiasa any @ biraompanjakana aza niova noho ny fanenjehana ny kolikoly, amin izao tsy misy tahotra sy henatra intsony, dia nisy fotoana koa teto teto niogaoga fa misy te hifehy irery ny toekarena, dia nandeha t@ iny lalana iny, dia nandrava , fa tsy nivadika ny taona dia niakatra avo roa heny ny vidin ny menaka, fa izao , diso Ravalomanana , ny hadisoany dia mety ho maro fa iray lehibe no holazaiko, tsy nahay nitazona ny fahefana, dia lasa ny mpamendrofendro sy ny misavoana toa anareo no mahazo laka, dia izao no vokany
Date: 05 septembre 2017 - 16:06
Ny ahy no somary manahirana ahy dia ny filazana lava eto fa fanatique tsy misy farany intsony, raha ny fazahoako ny atao hoe fanatique dia na ratsy na tsara nataon'ny olona iray dia tsy te halala afatsy iny olona iny ilay milaza azy fa fanatique.
Ny resaka eto dia ny fototry ny fanapotehana firenena, aiza ho aiza @ izany no hidiran'ny resaka fanatisme raha mahita sy mijery ny olona fa dia ny TGV no antony sy mahatonga an'izany, ary io tsy fanosoram-potaka fahatany fa dia notanisainy teo daholo ny ohatra mahakasika izany.
Date: 05 septembre 2017 - 17:08
ze tonga eo hoa dia mitovy daholo,na ianareo mpanakiana ireo aza no tonga eo dia tsy mahalala afa-tsy ny paosy aloha.ka na iza himenomenona na iza hiady hevitra eo,samy tompon'andraikitra isika tsirairay avy.tsy an'Rajao na Rajoelina na Ravalo irery ity firenena ity fa atsika Malagasy tsy vaky volo na tsy hakanavaka.
Ze hampandroso hiadiana hevitra fa aza zavatra mampilentika toy izao no handaniana andro hifamaliana eo!!!
Date: 05 septembre 2017 - 18:33
Te> tsy ny gasy rehetra no nanao coup d'État azafady an!!!!tsy ny gasy rehetra no nokaramaina hanongana an'io président élu t@ basy, herisetra, diabolisation.
Date: 06 septembre 2017 - 07:48
Raha mandinika ny zavatra nosoratako amin'ny fo mahitsy sy madio ianareo, dia tokony hahatsapa fa tena miresaka fanapotehina ny Firenena tokoa aho :
Fa ny asiako tsindrimpeo dia hoe : Tsy olon-tokana no nanapotika ny Firenena.
Tsy vao izao no nahapotika ity Firenena ity, fa hatramin'ny andron'i Tsiranana.
Tsy hain-tsika Gasy mihitsy ny nomena fahaleovan-tena ara-toe-karena.
Fa nihazakazaka nangoron-karena daholo daholo ireo Mpitondra an-tsika ireo.
Ary nanejika ireo izay tsy mitovy hevitra aminy.
NB : Ny fanamboaran-dàlana dia adidin'ny Fanjakana.
Tena iombonako hevitra aminao 100% ireo zavatra lazainareo ireo.
Fa ny fanatique amina tsangan'olona dia tsy hanaiky an'izany na oviana na oviana.
Fa io lazainao io no manakaiky ny marina.
Date: 06 septembre 2017 - 08:23
T-Marina >>> fanatique TGV
Date: 06 septembre 2017 - 08:42
Mila gadraina daholo, na TGV, na AREMA, na TIM, na iza na iza, ka nampahantra ny Firenena.
Izay no position-ko.
Date: 06 septembre 2017 - 08:51
Ny mampiomehy @ olona nanongana t@ 2009, rehefa mba mahatsapa tena rizareo fa tsy mandeha @ izay laoniny ny fandehan'ny firenena dia lazaina fa ny vahaoka rehetra sy ny mpanao politika rehetra no tompon'andraikitra, "c'est pas ma faute".
Nefa dia tadidio fa t@ andron'i Tsiranana dia anisan'ny voalohadohany teto Afrique i M:kara t@ lafiny maro.
Date: 06 septembre 2017 - 08:54
Izay aloha dia marina.
Manadio tena daholo.
Date: 06 septembre 2017 - 09:09
TGV no voakarama nanao coup d'État nefa tsy nanana programme de sortie de crise akory, ny ain'ny firenena nom nopotehiny, niaraka nihoko taminy ilayjamba
Date: 06 septembre 2017 - 12:05
izany mihitsy> hono ho'ah, enao ve efa naita DJ manao programa refa vita ny bal fa tsy mande mody izy matory? ka inona no programe sortie de crise endrasanao am DJ?
Mitapy be ny connexion, ef lava be ny fanazavàko fa tsy tafita, dia fintiniko @ ito fotsiny.
Frantsay nanjanaka= ny tombotsoany no nojereny
Tsiranana= saribakolin'ny frantsay, normal raha nety ny fiainam-pirenena
Ratsiraka+ Arema= 90% am-paosy, 10% an'ny vahoaka, niverina indray izy avy teo fa saiky notaperiny ny ain'i Gasikara.
Ravalo+ Tim = 80% am-paosy, 20% an'ny vahoaka
Rajao + Hvm=100% bankoavin'iry lerony daholo
Rajoelina nanongam-panjakàna= novahan'ilaikely ny fatorana dia soavaly tapa-kofehy daholo, potika ny firenena. Naka izay azony teo izy fa zara aza tonga teo.
Tsy nahataona olona ohatra ireny TGV raha mbola nety ny fitantana-dRavalo ny firenena.
Miombon-kevitra @ T-marina aho @ hoe: tsy nisy nahay nitantana firenena izany teto.
Pro-Ravalo izaho miteny eto io, saingy ilaina ny mijery mahitsy (objectif) mba hahitàna fahombiazana.
Date: 06 septembre 2017 - 15:11
Izany ve dia sarotra takarina ?
Date: 06 septembre 2017 - 15:22
Milaza aza hoe tenisany olona ka nahavita nampandroso an'i Gasikara ankoatra an'i M. Marc Ravalomanana eh!, aza atao safobemantsika fa fa izy tena nahavita, @izao hoy aho ny foem-basy no mipoapoaka ary ny ankamaroan'ny vahoaka lasa mpisotro toaka
Date: 06 septembre 2017 - 15:30
Mampiomehy mihitsy ireto fanatique ny tsy fitiavan-dra8 ireto, tsy misy resaka mihitsy eto hoe mahay mitantana ve ra8? fa ny resaka eto dia hoe ny TGV no fototr'izao fahoriana mahazo ny malagasy izao, izay no niezahanay nampiseho fa marina izany ary mba tsy ilazana anay hoe fanatique dia nanome ohatra betsaka hanohanana ny hevitra izahay.
Nipoitra ho azy teo ihany ny tsy fitaivana olona iray ka hanohanan-dry Mpiserana sy T-Marina andrajoelina izay lazaina fa namaha ny fatorana.
Date: 06 septembre 2017 - 16:19
Gasybabakoto> tena babakoto tokoa ianao, ary tsy mahazo resaka. Vakiana fotsiny hoe TGV tena fanatique be fa mody manodina resaka.
Ny fatotry ny vavahadin'nyy hadalana no novahan'i TGV raha tsy azonao, d izao anarchie be izao no iainan'ny firenena
Izany mihitsy<<<< Tena maha fanina marina ity resaka ity ka lasa tsy hay intsony hoe iza no fanatique an'iza ary iza no manana fijery objective.
Date: 07 septembre 2017 - 10:58
gasybabakoto> Mba ivereno vakiana ilay nosoratako momba an'i TGV aloha e.Manohana azy ve?Taiza? oviana?
Tsy tia an-dRavalo ve? taiza? oviana?
Inona no dikan'ny "pro-ravalo" aminao?